Sanxin anofara newe!
Sei uchifarira zuva revana zvakanyanya? muhudiki hwako, Nyika iri nyore, Paunosangana nevanhu, une moyo munyoro; Zuva rave kupenya, Nyika ichiri yakafanana neiyo nyowani. Kukosha kwekusachena semwana kuhupenyu, Zvimwe zviri izvo, Nechido chekutarisa kareidoscop ...
Novel coronavirus, Nanchang County Party komiti munyori, Xiong Yunlang, mutevedzeri wemukuru wedunhu revanhu Congress, Wu Xi, mutevedzeri wasachigaro wehurumende yedunhu, Wan Weiguo, mutevedzeri wasachigaro wedunhu CPPCC, Wan Weiguo, Secretary weSanjiang town Party komiti , de ...
Pamasikati aFebruary 12, Rao Jianming, Secretary of the Party group uye Executive mutevedzeri wasachigaro weJiangxi Provincial Federation yemasangano evashandi, akapinda zvakadzama muSanxin zvekurapa kuti aongorore denda rekudzivirira uye rekudzora basa, uye panguva imwechete akatumira 50000 yuan ye nyaradzo mon ...
Kurwisa kwakananga pachiitiko chekutanga | mhemberero yekuvhara yakakwana
Pamasikati aMay 23, 2020, veSanxin vekurapa vakaita makwikwi ekutaura ekuti "kutora chiitiko sepakati" padanho rechitanhatu pachivako chehofisi, icho chaitungamirwa naZhou Cheng, automation Center. Chiitiko ndiyo kona yekutanga yekutarisa yatinotarisana nayo, uye zvakare iri nharaunda yeTaoist ...
Iyo yekutanga hafu yeSanxin yekurapa manejimendi kudzidziswa
Mugore rakakosha "denda", isu takatanga kutora "Xinhuo" kuburikidza nepuratifomu yegore uye takasvika nemhuri yeSanxin munaJune 28. Tarenda ndiyo hwaro hwebhizimusi. General Secretary Xi akadzokorora kusimbisa kuti matarenda ndiwo marongero zviwanikwa zvekuziva natio ...
81Sanxin Medical & Derui kubvunza munhu wevashandi
Musi waMay 19, 2020, kuitira kuzadzikisa zvido zvine hungwaru zvekusimudzira uye kutsiga kwekambani, Sanxin Medical Co, Ltd. uye Dirui Consulting Co, Ltd. yakavhura musangano wekutanga-wehutungamiri hwevashandi. Iyo projekiti inonyanya kutarisa kubvunza uye kuraira pane tarenda ini ...